Amagama Okufanele Uwagweme ngama-imeyili | Martech Zone
NgoMsombuluko, Februwari 13, 2012 NgeSonto, ngoFebhuwari 12, 2012 Douglas Karr
Ngizizwe ngingconywana ngemikhuba yami ye-imeyili ngemuva kokufunda ukubona le infographic evela eBoomerang. Umsebenzisi we-imeyili ojwayelekile uthola imilayezo eyi-147 nsuku zonke, futhi usebenzisa okungaphezulu kwe- Amahora ama-2 nohhafu nge-imeyili ngosuku. Ngenkathi ngiyithanda i-imeyili njengomphakathi futhi sisebenzela ukuyihlanganisa njengecebo nawo wonke amaklayenti ethu, lezi zinhlobo zezibalo kufanele zikwesabise ekuguquleni indlela oziphatha ngayo ngokuthengisa nge-imeyili.
Your umhlinzeki wezentengiso we-imeyili kufanele inikeze ukwahlukaniswa nokuhlela ukuze ukwazi ukunciphisa inani lemiyalezo oyithumelayo futhi uyiqondise kakhulu… ukuthola ukwethenjwa nokunakwa kwababhalisile bakho. Ukuthuthukisa imicimbi eyinkimbinkimbi yemilayezo kanye nezimbangela kungatholakala ngokusebenzisa i ukuzenzekelayo kokuzenzekelayo injini.
Noma ngabe ikuphi, uzogwema ukumane uhlanganise nawo wonke ama-imeyili kudoti… noma okubi kakhulu… kufolda engenamsebenzi ye-imeyili!
Le infographic ivela boomerang, i-plugin ye-imeyili ye-Gmail. Nge-Boomerang, ungabhala i-imeyili manje bese uyihlela ukuthi ithunyelwe ngokuzenzakalela ngesikhathi esifanele. Vele ubhale umlayezo ngendlela ovame ukwenza ngayo, bese uqhafaza inkinobho ethi Thumela Kamuva. Sebenzisa isikhi sethu sekhalenda esisebenzisekayo noma ibhokisi lethu lombhalo eliqonda ulimi olufana "noMsombuluko olandelayo" ukutshela uBoomerang ukuthi uwuthumela nini umlayezo wakho. Sizoyithatha lapho.
Umhlahlandlela Wemiholo Yezenhlalo
Uma ukuthola imiyalezo eyi-12 kuhumusha kube yimizuzu engama-90 yomsebenzi, lokho kusho ukuthini ngempela? Futhi kungani ungasebenza ezinhlelweni ngaphandle kohlelo lwe-imeyili uqobo lube yingxenye ye-infographic yakho mayelana ne-imeyili?
Sawubona @ariherzog: disqus! Sabelana nge-infographic kaBoomerang lapha futhi siphawula ngayo… akuyona eyethu. Ngokuqondene nomsebenzi ongaphandle kwe-imeyili, ngikholwa ukuthi bazama ukubheka umzamo owengeziwe owenzelwe umsebenzisi ojwayelekile lapho efunda i-imeyili. Ama-imeyili esiwatholayo adinga ukuthi senze umsebenzi ngaphambi kokuphendula. Yilokho iphuzu. Ngokusobala, ngithole inothi lakho njenge-imeyili, elidinga ukuthi ngiphinde ngibuyekeze i-infographic futhi ngikuphendule. Yize lowo kungewona umsebenzi we-imeyili, wenziwa ngenxa ye-imeyili kimi.
Siyabonga ngokwabelana nge-infographic Doug yethu. ULemon.ly ube nesikhathi esihle esebenzisana noBoomerang.
Akungabazeki ukuthi sonke sikhungathekile ngebhokisi lethu lokungenayo le-imeyili. Kungakho kubalulekile ukuthi abathengisi bahlukane nomsindo. Ukwazi isikhathi sokuthumela kuyasiza. Kuhlole ukuze uthole ukuthi yimiphi imiphumela yesikhathi esilinganisweni esivulekile kakhulu.